WhatsApp ကိုဖုန်းခေါ်ပါ Androidsis
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Android application များ, လဲ tutorial, Whatsapp
ယနေ့ WhatsApp နှင့်၎င်း၏အသုံးအဆောင်များကိုမည်သူမသိသနည်း။ downloads ကိုမရေမတွက်နိုင်အောင်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၌ ဦး ဆောင်နေသည့်ဤ application သည် operating စမတ်ဖုန်းအားလုံးနီးပါးတွင်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူများအကြားအလွန်အသုံးများလာပြီးကြိယာသို့ပင်ညောင်းနိုင်သည်။
သို့သော်၎င်းသည်အလွန်သေးငယ်သောဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားသူများလည်းရှိသည်။ Telegram ကဲ့သို့သောအခြား messaging application များသည် utilities အသစ်များမပါ ၀ င်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပါသည်။ အသံဖြင့်ခေါ်ဆိုမှုများထပ်မံပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီ Utility ဟာကြီးထွားရန်အနည်းငယ်သာဖြစ်ပုံရသည်။
မကြာခင် WhatsApp မှတဆင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်တော့မည်
WhatsApp ၏ဤအသွင်အပြင်သစ်မည်သို့ဖွံ့ဖြိုးလာမည်ကိုမသိရှိရသေးပါကသံသယများစွာပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲဘယ်နှစ်ယောက်စကားပြောဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည်နည်း။ သူတို့လုပ်လို့ရလား အုပ်စုမှခေါ်ဆိုမှုများ အားလုံး၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများကိုရန်? ။ လက်ရှိ WhatsApp အုပ်စုများသည် ၂၅၀ ကျော်ပါ ၀ င်နိုင်သည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်း စား၍ ပြcomplicatedနာသည်ရှုပ်ထွေးပုံရသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဖုန်းခေါ်ပြီးအဆက်အသွယ်အသစ်များထည့်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အလိုအလျှောက်အဆက်အသွယ်များဖြင့်ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုကိုအရှင်းဆုံး Skype ပုံစံဖြင့်ဖန်တီးနိုင်လျှင်။ အလွန်ကောင်းမွန်သော messaging application ကိုတီထွင်သူများသည်ဤပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မည့်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုရှာဖွေရန်သူတို့၏ ဦး နှောက်ကိုအရှိန်မြှင့်လိမ့်မည်။
ငါတို့သိထားတဲ့အတိုင်း, အင်တာနက်ပေါ်မှအသံခေါ်ဆိုမှုများ၊ ဒီ application များအတွက်ရှေ့ဆက်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုငါသိ၏ Wi-Fi မပါပဲဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းကကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များကိုအလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုဖြစ်စေနိုင်သည် လက်ကိုင်ဖုန်းများ ပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာဖုန်းနံပါတ်တွေဆီဖုန်းခေါ်တာကစားသုံးမှုကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မယ်ဆိုတာသိချင်တဲ့သူတွေရှိတယ်။
ဘေးဖယ်မေးခွန်းများ, လျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုသူများအဖြစ်, သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုတိုးတက်စေရန်မည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုကြည့်ဖို့အမြဲတမ်းတန်ဖိုးထားသည်။ ဆက်လုပ်ပါ ဦး WhatsApp အံ့ဘွယ်သောအမှုအလုပ်လုပ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပြိုင်ဆိုင်မှုသည်တိုးတက်မှုကိုမရပ်တန့်စေနိုင်သည့်အချက်ဖြစ်သည် သုံးစွဲသူများသည် Telegram သည် WhatsApp ထက်ပိုကောင်းသော application တစ်ခုဖြစ်လာသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်.
ဤအုပ်စုခေါ်ဆိုမှုကိုမည်သည့်အချိန်၌ရနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိသေးပါ။ ငါတို့တောင်မသိဘူး သင်၏ developer များသည်ထိုကဲ့သို့သောနည်းပညာဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုကိုမည်သို့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မည်နည်း။။ သို့သော်လျှောက်လွှာအတွင်းဤဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့မတွက်ဘဲ ကျနော်တို့အခြားတိုးတက်မှုအမျိုးအစားများကိုစဉ်းစားနိုင်ပါတယ် ယှဉ်ပြိုင်မှုရှိပြီးသားဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည်အတင်းအဓမ္မချီတက်ပွဲများတွင်ခေတ်မမီတော့သောလျှောက်လွှာတစ်ခုအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ဆုကြေးတစ်ခုပေးလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Whatsapp » WhatsApp ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုပါ